Shiinaha Mass Production AR galaas fiber galab jarjar warshad iyo alaableyda | Yuniu
Waxsoosaarka Mass Production AR galaasyada la jarjaray waa shay muhiim ah oo loo isticmaali karo Glassfibre Reinforced Concrete (GRC), waa shey 100% aan dabiici ahayn, sidoo kale waa bedelida birta iyo asbestos ee qeybta sibidhka ee aan la soo dejin.
AR Fiberglass / Glass Fiber Chopped waxaa si gaar ah loogu talagalay GRC (muraayadda dib-u-sameysan ee muraayadda) oo si wanaagsan ugu faafta howlaha horusocodka (isku-darka budada qallalan ama isku dhafka qoyan) ee loogu talagalay qaabka dambe ee qaybta GRC.
Shayga Dhexroor (um) Dhererka la jarjaray (mm) Cusbi la jaan qaadi kara
AR Fiberglass qaybo jarjaran 10-13 12 EP UP
AR Fiberglass qaybo jarjaran 10-13 24 EP UP
1.Modest biyaha. Socodka wanaagsan, xitaa qaybinta alaabooyinka dhammaaday.
2.Quickly-out-out, xoog farsamo sare ee alaabada la dhammeeyay. Waxqabadka ugu fiican ee kharashka.
3.Goodding good: hubi in sheyga uusan qulquleynin oo uusan kubbadda ku sii dhex socon.
4. Kala firidhnaanta wanaagsan: Kala firidhnaanta wanaagsan ayaa ka dhigaysa fiilooyinka si siman u kala daadsan marka lagu qaso madaafiic sibidh ah.
5. Astaamaha jirka iyo kiimikada ee aadka u fiican: waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa xoogga alaabada sibidhka.
1. Saamaynta bilowga dildilaaca iyo ballaarinta fiber-ka galaaska la adkeeyay ee shubka fluorine-ka. Hagaajinta waxqabadka kahortaga bulaacada ee shubka. Hagaajinta waxqabadka dhaxan ee la taaban karo. Hagaajinta iska caabinta iyo adkeynta shubka. Hagaajinta cimri dhererka shubka.
2. Faybalka dhalada wuxuu ku biirayaa khadka sibidhka, guddiga gypsum, birta dhalada, qalabka isku dhafan, qalabka korontada iyo mashaariicda kale ee dhismaha, oo la xoojin karo, ka hortagga dildilaaca, iska caabbinta iyo adkeynta.
3. Fiibaarka dhalada ah wuxuu ku biirayaa kaydka, saqafka sare, barkadda dabaasha, barkada musuqmaasuqa, barkadda bullaacadaha ayaa horumarin kara noloshooda adeeg.
AR Glass Fiber Chopped Strands waxaa lagu soo duubay baco gacmeed ama kiishado tolmo leh, qiyaastii 25kg halkii kiish, 4 kiishba lakabkiiba, 8 lakab halkii xabbadood iyo 32 kiishba sariishkiiba, 32 kiish oo walboo badeecooyin ah waxaa soo buuxiyay filim isku duuban oo isku duuban. Sidoo kale badeecada waa la buuxin karaa iyadoo macaamiisha looga baahan yahay.
Faahfaahinta Bixinta: 15 maalmood kadib helitaanka deebaajiga.
Q1.Mad lacag ka qaaddaa caaryada? Waa imisa? Ma la soo celin karaa? Sidee loo soo celiyaa?
Wax lacag ah lagama qaadayo cadeynta
Q2.Waa maxay shahaadada shirkaddaadu dhaaftay?
Q3.Waxay yihiin macaamiisha shirkaddaadu ka gudubtay kormeerka warshadda?
Q4. Immisa ayey qaadataa waqtigaaga dhalmada ee caadiga ah?
Alaabada caadiga ah 7-15 maalmood, alaabooyinka la qaabeeyey 15-20 maalmood
Q5.Ma sheygaagu leeyahay tirada ugu yar ee dalabka? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
Ma jiro badeecado caadi ah, badeecooyin gaar ah 1 tan
Q6.Waa maxay awooddaada guud?
500000 tan / sanadkii
S7.Sidee u weyn tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha waxsoosaarka sanadlaha ah?
200 qof, laba shirkadood oo gudaha ah iyo hal laan Thailand ah
Hore: 100 gsm / 160gsm Fiberglass Mesh
Xiga: Fibre fiber fiber kaarboonka birta ah